Rohingya Students Forum: 2020
ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းဆေးသမားတော် ဒေါ်အာမီနာဟ်
Daw Amina (1899-1987)
ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းဆေးသမားတော် ဒေါ်အာမီနာဟ် (၁၈၉၉-၁၉၈၇)
ရှေးရိုဟင်ဂျာတို့သည် ခေတ်အလျောက် ဒေသထွက် သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အသီးအရွက်၊ အနွယ်အမြစ် စသည်တို့ကို မိမိတို့ ဘိုးဘွားအစဉ်အလာမှ လက်ဆင့်ကမ်းရရှိထားသော ရှေးဆေးထုံးနည်းများနှင့်အညီ ဆေးဝါးများပြုလုပ်ကာ ရောဂါဘယာကုသလေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆေးကုသပေးခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းဆေး ထုံးနည်းတတ်ကျွမ်းသော ဆရာသမားတော်များလည်း နေရာအနှံ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ခေတ်ကာလတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ တစတစ ပျောက်ကွယ်သွားနေသည်။ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များအနက် အမေ့ခံရသော တစ်ဦးအကြောင်းကို ဤနေရာတွင် အကျဉ်းမျှဖော်ပြပေးပါမည်။ ထိုသူကား တိုင်းရင်းဆေးသမားတော် တစ်ဦးဖြစ်သည့်အပြင် စိတ်စေတနာကောင်းသူ၊ ရက်ရောလှူဒါန်းသူ၊ ပညာရေးကို မြတ်နိုးသူ၊ မိမိအမျိုးကို တိုးတက်စေလိုသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယင်းသူသည် အခြားမဟုတ် ဘောလီမျိုးနွယ်စုမှ ဒေါ်အာမီနာဟ် ဖြစ်သည်။
အာမီနာဟ်ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၃-၅-၁၂၆၁ (၁၈၉၉) ခုနှစ်တွင် မောင်းတောမြို့နယ် ဘောလီဘာဇားရွာ၌ ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်း ညီအစ်မနှစ်ဦးအနက် အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်သည်။ ဖခင်မှာ ဒေးဝန်ကြီး ဖတေအာလီဘောလီ၏မြစ်၊ အာမီရ်အာလီမျာ၏ ညီအရင်းဖြစ်သူ အုံဇီရ်အာလီမျာနှင့် မိခင်မှာ ဒေါ်ဟားလီမာ တို့ဖြစ်သည်။ ဖခင်သည် မဇ္ဈိမဒေသမှ ခေတ်ပညာသင်ယူလာသူဖြစ်၍ မိခင်မှာ ထိုအချိန်က ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းဆေး သမတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမီနာဟ်သည် မျာစော်ဘွားမိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ရာ ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝချမ်းသာသူလည်းဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်ဘဝတွင် ဒေသခံ မလဝီဆရာမှ အိစ္စလာမ်သာသနာ့ အခြေခံပညာကို သင်ယူတတ်ကျွမ်းခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်လာသောအချိန်တွင် မိခင်၏ တိုင်းရင်းဆေးဝါး ဖော်စပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင် ကူညီခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာ တတ်ကျွမ်းလာခဲ့သည်။ မိခင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ထိုဒေသတစ်ဝိုက်တွင် ထင်ရှားသော ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းဆေး သမားတော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရပ်ဝေးနယ်ခြားမှ ဝေဒနာရှင်များ လာရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ကြသည်။ ခွဲစိတ်၍ကုသသည်လည်းရှိသည်ဟု အချို့က ဆိုသည်။ သူ၏ တိုင်းရင်းဆေးကို Hakimi Daru ဟု အမည်တပ်ခေါ်ခဲ့သည်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြှားရွယ်ရောက်သောအခါ ကာဇီအာဘာတ် ခေါ် စံပ္ပာယ်ကုံး၌ တာဝန်ကျနေသော ကာဇီ (ထိုချိန်က အင်္ဂလိပ် တရားရေးရာအုပ်) ဘောက်တာမာဟ်မွတ်နှင့် နဖူးစာဆုံ၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခဲ့လေသည်။ သူတို့မှ သား (၆)ယောက်နှင့် သမီး (၃) ယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ချစ်ဘဝဖော် ကာဇီ ဘောက်တာမာဟ်မွတ်သည် အငယ်ဆုံးသား၏ မျက်နှာမမြင်ရဘဲ ဘဝကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သခဲ့ရှာသည်။
ဒေါ်အာမီနာဟ်မှာ သားသမီး ၉ ယောက်နှင့် တစ်ခုလပ် မုဆိုးမဘဝဖြင့် မိသားစုလှေကြီးကို ခုတ်မောင်းရလေသည်။ မိဘဖက်မှ အမွေအဖြစ် လယ်မြေများ အမြောက်အမြား ရရှိခဲ့သည်ဖြစ်၍ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပူပန်စရာမရှိခဲ့ချေ။ သို့သော် ဖခင်၏အရိပ်မရှိသော သားသမီးများကို ပျိုးထောင်ရန်ကား မုချခက်ခဲလှပါမည်။ အမီနာဟ်သည် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူဖြစ်သည်။ အမြော်အမြင်ကောင်းသည်။ မိမိလည်း ထင်ရှားသော သမားတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်တစ်ကြောင်း၊
သားသမီးများ၏ ဖခင်လည်း ကာဇီ တရားရေးရာအုပ် ဖြစ်သည်တစ်ကြောင်း၊ အမျိုးအနွယ်ကလည်း ပညာတတ် မျာစော်ဘွားရိုးဖြစ်သည်တစ်ကြောင်း စသော နောက်ခံအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ပညာ၏တန်ဖိုးကို သိနားလည်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သားသမီးများကို ပညာတတ်ဖြစ်စေရန် သိန္နိဌာန်ချခဲ့သည်။ မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရင်း မိသားစုကို စနစ်တကျ အုပ်ထိန်းခဲ့လေသည်။ သားသမီးများ၏ ပညာကြားရေးတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်မိစေရန် မိမိပိုင်လယ်မြေအချို့ကို စီပွားဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သားသမီးများကိုမူ ပညာဘက်သို့သာ အလုံးအရင်း ထားရှိစေခဲ့သည်။
မိခင်အာမီနာဟ်၏ ကြိုးပမ်းမူကြောင့် သားကြီး ဘေဒါရ်အဟ်မတ် (နောင်တွင် အဘူဒါခ်ထော်ရ် ဟု ကျော်ကြားခဲ့သူ) ကို အဆင့်မြင့်ပညာဆည်းပူရန် အိန္ဒိယ စစ်တကောင်းသို့ ပညာသင်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ပညာသင်ယူပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ Compounder ဆေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဘောလီဆိုက်ကယ် တစ်ခုလုံး၌ အဘူဒါက်တောရ် (ဆရာဝန်အဘူ) ဟု ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဒုတိယသား နေဆူမျာမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဘက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တတိယမြောက်သား ဦးမောင်နု မှာ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘောလီဘာဇား၊ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်စသော မြို့များတွင် လူငယ်များ၏ ပညာတန်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့ အမှတ် (၂) အလကကျောင်း၊ ကြိမ်ချောင်းအထကကျောင်းတို့မှာ ဆရာကြီး၏ သွေးချွေးအရောင်ထင်ဟပ်နေသည်။ စတုတ္ထမြောက်သား ဦးမြသန်းမှာ ကျန်းမားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ စစ်တွေ စသော မြို့များတွင် တာဝန်ထမ်းခဲ့၍ အများပြည်သူ၏ အကျိုးဆောင်သူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တောင်ပြိုတိုက်နယ်ဆေးရုံးသည် ကျန်းမာရေးမှူး ဦးမြသန်း၏ ကြိုးပမ်းမှုမှ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပဉ္စမမြောက်သား ဦးမြစိန်သည် ပြည်နယ်ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးမှူး တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တောင်ကုတ်၊ သံတွဲ၊ မြောက်ဦး၊ စစ်တွေစသော မြို့များတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအပေါ် သစ္စာရှိရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အငယ်ဆုံးသား မာဟ်မွတ်စိန်မှာ ကျောက်ဖြူပညာရေးကော်လိပ်၌ ငန်းဖျားရောဂါကြောင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ရှာသည်။ ဤသည်မှာ မုဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ရသော်လည်း ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲ သားသမီးဘဝကို လူရာဝင် သူ့ကျိုးဆောင်နိုင်အောင် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သော ဒေါ်အာမီနာဟ်၏ စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်၏ ရလဒ်များဖြစ်ပေသည်။
ဒေါ်အာမီနာဟ်သည် စေတနာထက်သန်သူ၊ ရက်ရောလှူဒါန်းသူတစ်လည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၅၃ ခုတွင် ကာဇီအာဘာတ် (စံပ္ပာယ်ကုံးကျေးရွာ) ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျော် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ လူများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ တစ်ဖက်က ရန်သူ၏ ခြောက်လှန့်မှုကို ခံနေရသဖြင့် ရွာကိုစွန့်ခွာ၍ ဘောလီဘာဇားသို့ ခိုဝင်လာခဲ့သည်။ ထိုရွှေ့ပြောင်းလာသူများကို သမားတော် ဒေါ်အမီနာဟ်က "ငါ့အမျိုးတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ငါ့မှာသာ တာဝန်ရှိသည်" ဟုဆိုကာ မိမိပိုင် ယာခင်းစိုက်မြေယာများကို ပေးအပ်လှူဒါန်းကာ အခြေချနေထိုင်စေခဲ့သည်။ ဒေသအခြေအနေ တည်ငြိမ်လာသောအခါ ထိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ မိမိ၏ရွာသို့ ပြန်သွားကြသော်လည်း အချို့အိမ်ထောင်စုမှာမူ ပြန်မသွားဘဲ ဘော်လီဘာဇားတွင် ရာသက်ပန်နေထိုင်လာသည်ကို ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဒေါ်အမီနာဟ်သည် မိမိ၏သားသမီးများကို ပညာတတ်မြောက်စေခဲ့သည်သာမက မရှိဆင်းရဲသားများအားလည်း ငွေရေးကြေးရေးများ ကုန်ကျကာ သာသနာ့ပညာ သင်ပေးခဲ့သည်။ ဘော်လီမြေမှ ထင်ရှားသော ဟာဖီဇ် နှစ်ပါးဖြစ်သည့် မဂ်ဘူလ်ဟာဖေစ်နှင့် ဇော်လာလ်ဟာဖီးဇ် ညီနောင်တို့ကို ဒေါ်အာမီနာက ငွေအကုန်အကျ အစားအသောက် ထောက်ပံ့၍ အဖေ့ဇ်ဘွဲ့ ရစေခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ဟာဖီးဇ်သင်ကျောင်းတစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းက များစွာသော သာသနာ့ဟာဖီဇ်ဆွပ်များ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ ဘောလီဘာဇား (ကြိမ်ချောင်း)ေ မြောက်ရွာတွင်ရှိသော ဟာဖေ့ဇ်သင်ကျောင်းမှာ ဒေါ်အာမီနာလှူဒါန်းခဲ့သော ကျောင်းသည် ချောင်းကမ်းပြိုပျက်စီးသွားပြီးနောက် ဟာဖီးဇ်ညီနောင်နှစ်ပါးက ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သောကျောင်းဖြစ်သည်။
မရဏတရားသည် မည်သူကိုမှ မျက်နှာမထောက်၊ အချိန်ကျလျှင် သွားမြဲပါ။ ၁၉၈၇ ခု စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်တွင် ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းဆေးသမားတော် ဒေါ်အာမီနာဟ်သည် မိမိ၏ အချစ်တော်သားသမီးများကို စွန့်၍ နိဗ္ဗာန်ခရီးဆက်ခဲ့လေသည်။ ကွယ်လွန်သည့်အချိန်အထိ မိမိ၏ အစွမ်းထက်သော တိုင်းရင်းဆေးဝါးဖြင့် များစွာသောသူများကို ရောဂါဘယာဝေဒနာမှ ကူသပေးခဲ့လေသည်။ များစွာသောသူများကို ပညာရွှေအိုးနှင့် လက်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ သူတစ်ပါး၏ နာကျင်မှုကို ပျော်ရွှင်မှုပြောင်းလဲပေးခဲ့လေသတည်း။ အလ္လာဟ်မြတ်တော်က ဒေါ်အာမီနာဟ်အား မြင့်မြတ်သော ဂျန္နတ်သုခဘုံ ချီးမြှင့်တော်မူပါစေ…။
ဇွန်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ ။( လူထုဝဏ္ဏ ရေးသည်)
Posted by Rohang king at 7:23 AM
Fúl Baganót Zai
Aiyo berai fúl baganot,
Nanandoilla fúlor roñgot.
Noccá háñcer kéthkerái,
Zunib fulor duwarot ai.
Gulab fúl o guccá guccá,
Waawá óiyé muinna keñça.
Dheyal fúlor Meenmandari,
Hoitiri fúlebuzár ofúrani.
Bossá fúle rasta hañsat,
Barái lor dil-mon lagai.
Raatkarani fúle ator laga,
Kúcbo gorér raitor zama.
Samba fúl or roñg cúnali,
gasór agat gorér zílimilí.
Razulla fúl o ki córmindá
manúic deki luwar séga.
Cájjámanir fúlór dhuwat,
Hoitori fúl fúitthé gul hái.
Sújja fúl or adorór rosí
beil loi táke muka-mukí.
Maik fúlor hóbor gíri,
Únalufúl aibó bosór fíri.
Hoñla fúl de fanír bácí,
Hoinnar dehá nitti fítti.
Diyo fúl o boiddor táalit,
Gasár tálot keñl lari.
Cúnali fúl or lal roñge,
Fudin or córak keén sonke.
Zar zar boitta tete gunor,
mili táke fúl baganot.
Saité saité beil dhufí bóu
Fúlor hotá nofúrai bóu. ♥
Le.- Kuwaiccorjjá |
Jan 23, 2020, 12:34 Am
Labels: poem, Rohingyalish, သုတ
Poetry For Humanity ကဗျာရွတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာကဗျာဆရာများနှင့် ကဗျာများ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်း၌ ကျင်းပခဲ့သော လူသားဆန်မှုအတွက် ကဗျာ [Poetry for Humanity] ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အခြားတိုင်းရင်းသား ကဗျာဆရာများနှင့်အတူ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်သား ကဗျာဆရာများက ပါဝင်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းက ကဗျာဆရာ ၄၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့သည့် အခမ်းအနားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကဗျာအနုပညာသည် အသားအရောင်၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ် ခွဲခြားမှုကို လုံးဝ လက်မခံကြောင်း ပြသသွားသော သမိုင်းဝင် ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကဗျာဆရာများသည် မိမိတို့ ဖြတ်သန်းနေရသောဘဝ၊ ခံစားချက်၊ ခံယူချက် တဲ့အကြောင်းအရာအပေါ် ကဗျာများရေးဖွဲ့ကာ အသီးသီး ရွတ်ပြကာ မိမိတို့ ခံစားချက်တွေကို မြန်မာပြည်တို့အား မျှဝေခဲ့သည်။ သူတို့သည် ကဗျာစာပေမှတဆင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဟု ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကဗျာဆရာများနှင့် သူတို့၏ ရွေးချယ်ခံကဗျာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ကဗျာရွတ်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာကဗျာဆရာများမှာ-
၂။ ယျာတင် (ရိုဟင်းသား)
၅။ ရှာဟီးဒါ (ခ) ဝင်းဝင်းမော်
၁။ ကျွန်​​တော်​ပါ... ရိုဟင်ဂျာတစ်ဦး​
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ကလေးတစ်​​ယောက် ​မဖြစ်​​ခဲ့ပါ။
မွေးစာရင်း ပိုင်​ဆိုင်​ခွင့်​ မရရှိဘဲဖြစ်​ခဲ့​တော့
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို သူငယ်တစ်​​ယောက်​ မဖြစ်ခဲ့ပါ။
လူမျိုးဝိ​သေသတစ်​ခု ပိုင်​ဆိုင်​ခွင့်​ မရရှိဘဲဖြစ်​ခဲ့​တော့
မွေးစားသား တစ်​​ယောက်​ကဲ့သို့ ဖြစ်​ရသူသာ။
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ​ကျောင်းသားတစ်​​ယောက် ​မဖြစ်ခဲ့ပါ။
​ဗမာလူမျိုး မျက်​နှာသွင်​ပြင်​ မပိုင်​ဆိုင်​ဘဲဖြစ်​ခဲ့​တော့
မနှစ်​မြို့စရာ အနာဂတ်​တစ်​ခုလို ဖြစ်​ရသူသာ။
ကျွန်​​တော် ​အခြား​​​သောကျေးရွာတစ်​ခုကို ​ရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ဒေသခံတစ်​​ယောက်​ မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ထိန်းမရချုပ်​မရတဲ့ အချုပ်သားတစ်​​ယောက်​ကဲ့သို့ ဖြစ်​ရသူသာ။
ကျွန်​​တော်​ မြို့နယ်​​ကျော်​ပြီး သွားခဲ့ရတဲ့အခါ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို နိုင်ငံသားတစ်ဦး မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ပုံစံ-၄ ဆိုတဲ့ ခရီးသွားလာခွင့်​စာ​ရွက်​က​လေးကို ကိုင်ဆောင်ခဲ့ရတော့
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ​မောင်​မယ်​သစ်​လွင်​တစ်​​ဦး မဖြစ်​ခဲ့ပါ။
အသက်မွေးဝမ်း​ကျောင်းဝင်​ အထူးပြုဘာသာ သင်ခွင့်မရတော့
ကျွန်​​တော်​ လူသူများနဲ့ ချဉ်းကပ်တဲ့အခါ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို သူတစ်​ပါးရဲ့ လက်ခံစရာလူတစ်​ဦး မဖြစ်​ခဲ့ပါ။
လူမှုရေးခွဲခြားမှုနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒ ခံစားရတော့ရောဂါဖြင့်
ခြေချုပ်ခံရသူ တစ်​​ဦးကဲ့သို့ ဖြစ်​ရသူသာ။
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်​လို စေ့စပ်ထားတဲ့သတိုးသား​လောင်းတစ်​ဦး မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ကျွန်​​တော့်​ တဲအိမ်က​လေးကို ပြုပြင်လိုတဲ့အခါ
ကျွန်​​တော့်​ကို သင့်လို ခွင့်​မပြုခဲ့ပါ။
ဘာမဟုတ်​တဲ့ ငြင်းပယ်မှုများနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတော့
ကျွန်​​တော်​ လုပ်ငန်းအနည်းငယ်​လုပ်ကိုင်ရန်​ စီစဉ်​တဲ့အခါ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို လွတ်​လပ်​စွာ ဖောက်ကားနိုင်သူတစ်ဦး မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ကျွန်​​တော်​ အစိုးရဝန်ထမ်း​​ရာထူးအတွက်​ လျှောက်တဲ့အခါ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ​​အ​ရွေးခံခွင့်​ရသူတစ်​ဦး မဖြစ်​ခဲ့ပါ။
ကျွန်​​တော် အစိုးရ​-ဆေးရုံ​တွေ တက်​ခဲ့ရတဲ့အခါ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ဦးစားပေးလူနာ မဖြစ်ခဲ့ပါ။
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ဘာသာ​ရေး ကိုင်းရှိုင်းသူတစ်​ဦး မဖြစ်​ခဲ့ပါ။
ပြိုပျက်ခံ​ဗလီထဲ ဝတ်ပြုခွင့် ကန့်သတ်ခံထားရတော့
တီးကွက်​ညီညီ ဖန်​တီးခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းနဲ့
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို ​ဘေးအန္တရယ်​မှ
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို အရပ်သားတစ်ဦး မဖြစ်ခဲ့ပါ။
စစ်တမ်း ပစ္စည်းတစ်​ခုကဲ့သို့ ဖြစ်​ရသူသာ။
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို 'မိမိနိုင်ငံ'ဟု ​ခေါ်ခွင့်​မရပါ။
ခိုးဝင်​လာခဲ့သူ တစ်​ဦးကဲ့သို့ ဖြစ်​ရသူသာ။
ကောင်းကင်​ကိုဖြတ်​ပြီးတိုက်​လာတဲ့ ​လေထုကို ရှုရှိုက်​ရလည်း
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်​လို လူသားတစ်​ဦး မဖြစ်​ခဲ့ပါ။
အထီးကျန်​သူ တစ်​​ယောက်ကဲ့သို့ ဖြစ်​ရသူသာ။
ကျွန်​​တော်​ နေထွက်လာတာကို ကြည့်​ရှု​ပေမယ့်​လည်း
ကျွန်​​တော်​ဟာ သင့်လို သက်ရှိသတ္တဝါတစ်​ဦး မဖြစ်ခဲ့ပါ။
့​လွတ်လပ်မှုရဲ့ ပြည့်စုံတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို တစ်​ကြိမ်တစ်​ခါ​​လောက်​ မြည်းစမ်းနိုင်​ဖို့
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ​လေးတစ်​ခုမှာ တစ်​ကြိမ်​​တစ်​ခါလောက်​ ​လျှောက်​လည်​ဖို့
ကျွန်​​တော့်​ နှလုံးသားက ​မျှော်​လင့်​ပါတယ်​။
ခုခေတ်ကြီးမှာ ...ဘယ်သူမှ ကျွန်​​တော်​လို မဟုတ်​တော့ပါ။
ကျွန်​​တော်​နဲ့ နှိုင်းနိုင်​သူဆိုလို့ ကွ
ကျွန်​​တော်​နဲ့ နှိုင်းနိုင်​သူဆိုလို့ ကျွန်​​တော်​ပဲ ရှိပြီး
အဲ့ဒီကျွန်​​တော်​ဟာ ... ရိုဟင်ဂျာ တစ်ဦးပါ။
မြန်မာပြန်ဆို- Yar Tin (Rohingthar)
၂။ "မှား​နေတာ ငါတို့လား"
"ခိုးဝင်​လာသူ​တွေ မဟုတ်​​ကြောင်း" ဆိုတာကို
ဒါကို သူတို့က -
"ရခိုင်​ပြည်​ရဲ့ မူလဘူတဖြစ်​​ကြောင်း" ဆိုတာကို
"ရခိုင်​ပြည်​နယ်​ကို သီးခြားလုဖို့​ကြံစည်​နေတယ်​" ဆိုပြီး
"အ​ခြေခံလူ့အခွင့်​အ​ရေး​​တွေ ခံစားပိုင်​ခွင့်​ရှိ​ကြောင်း" ကို
"သမိုင်း​ကြောင်းအရ မှန်​မှန်​ကန်​ကန်​ လုပ်​ပါ" ဆိုပြီး
"မဟုတ်​မတရား တိုင်းရင်းသား​တောင်း​နေတယ်​" ဆိုပြီး
"ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ​ဖြေရှင်းပါ" ဆိုပြီး
မဟုတ်​မမှန်​ စွပ်​စွဲပြီး သတ်​ဖြတ်​​နေကြတယ်​။
"ဒီနိုင်​ငံရဲ့ တရားဝင်​ နိုင်​ငံသားပါ" ဆိုတာကို
"မ​နေ့တ​နေ့က ခိုးဝင်​လာသူ​တွေ" ဆိုပြီး
"သွားလာခွင့်​၊ ပညာသင်​ယူနိုင်​ခွင့်​၊ ဝတ်​ပြုနိုင်​ခွင့်​" ​တွေကို
"နန်း​တော့်​ ပလ္လင်​ ​တောင်း​နေဘိအလား"
ငါတို့ ဘာများ မှား​နေကြတာလဲ။
ရေးဖွဲ့သူ-📝 ယျာတင်​ (ရိုဟင်းသား)
၃။ ရိုဟင့်သား ဆန္ဒ
၄။ ရိုဟင်ဂျာတစ်ဦး တိရိစ္ဆာန်ရုံသွားခြင်း
တစ်ချို့ကျတော့ ကျွန်တော့်လို တစ်ကောင်ကြွက်။
ကြည့်နေတဲ့ လူအုပ်ရဲ့ မျက်နှာ
“ဒီကောင် လှောင်အိမ်ထဲမှာနေရတာ လွတ်လပ်မှာပါ” လို့မှန်းဆကြ။
သူ့အတွက် ရင်နာတယ်၊ ဝမ်းနည်းတယ်။
လေးစားစွာ အကြံပေးပါရစေ လောကကြီးရေ။
တခါကညလယ်ခေါင် အိပ်မရလို့ နိုးထလာ၊
ဒုက္ခသည်စခန်း (က) ကနေ စခန်း (ခ) ကို
သတင်းထောက်တွေက သူတို့ကို နာကျည်းစရာဖြစ်ရပ်တွေဆီ
ပရဟိတအဖွဲ့တွေက ငိုယိုနေတဲ့ကလေးတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊
အလှူခံဖို့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ထုတ်ဝေ၊
သံတမန်တွေက အတောင့်အတင်းဆုံးတဲတွေထဲအထိလာပြီး အားပေးစကားပြော၊
“ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ ဆိုတာ နားလည်တယ်” လို့ထပ်တလဲလဲပြော၊
ပြီးရင် ဘယ်တော့မှ ပြန်ပေါ်မလာ။
သူတို့က ထင်မှာ ...သြော်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ရေးဖွဲ့သူ- Azad Mohammed
မြန်မာမြန်ဆို- Kenneth Wong and Sai Sam
၅။ မေ့ရခက်တဲ့ အတိတ်ဆိုး
ရင်နာဖွယ်ရာ ငါတို့အတိတ်​ ​မေ့ရခက်​​နေဆဲပါ။
ဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ မေ့ရခက်တဲ့ အတိတ်ဆိုးပါ။
ရေးဖွဲ့သူ- Shahida @ Win Win Maw
၆။ ရို-ဌာနီသည် ​ဝေးသနှင့်
ဟိုး . . .
ငါ့လိုလူသား ရှင်​သန်ကျိုးမဲ့ ​
​နေ့ညမပြတ်​ ​စောင့်ဆိုင်းလာလည်း ​​​
​ရေးဖွဲ့သူ - Řø Anamul Hasan
Labels: ရိုသတင်း, ရိုသမိုင်း, poem, ပညာရေး, ပြည်တွင်း
စံပယ်၊ ဇီဇဝါ၊ ထပ်တရာ
မယူရ၊ ကာယာပူရ ချစ်နှမ
* ဒါးလား = တောင်ကျော်လမ်း
Posted by Rohang king at 8:52 AM
Labels: ရိုသမိုင်း, books, poem